कोरोना बिरुद्ध लड्न कुन कलाकारले कति दिए ? हलिउड र बलिउड - समय-समाचार
कोरोना बिरुद्ध लड्न कुन कलाकारले कति दिए ? हलिउड र बलिउड
समय-समाचार बिहीबार, २०७६ चैत्र २७ गते, ०५:३५ मा प्रकाशित
बलिउड हिरो अक्षय कुमार ले २५ करोड दिने घोषणा गरेका छन । कार्तिक आर्यानले प्रधानमन्त्री राहतकोषमा एक करोड दिएका छन् । त्यसैगरी बरुण धावनले ५५ लाख दिने भएका छन् । त्यसैगरी सिल्पा सेट्टी र उनका पति मिलेर रु २१ लाख प्रधानमन्त्री राहतकोषमा हाल्ने भएका छन । त्यसैगरी सलमान खान, साहरुख खान र अमिर खानले पनि सहयोग गर्ने भएका छन् भने केहिरकम प्रधानमन्त्री राहत कोषमा हालिसकेका छन् ।
हलिउड कलाकारहरुमा रायन रेनोल्ड र ब्लेक लाईभ्लिले १० लाख डलर ‘फ़िडीङ्ग अमेरिकालाई’ दिने भएका छन् । त्यसैगरि डोनाटेला भर्सेज र उनकी छोरी एलेग्रा भर्सेजले २ लाख युरो ईटालिको अस्पताललाई दिने भएका छन् । जस्टिन बिबरले पनि सहयोग गरेको घोषणा गरेका छन् यद्दपि ठ्याक्कै यति पैसा भनेर उल्लेख भने छैन ।
प्यारिस हिल्टनले १ करोड डलर दिने भएकी छिन । जर्ज कोलोनी र उनकी पत्नी अमल मिलेर १० लाख डलर दिने घोषणा गरेका छन् । त्यसैगरी ओप्रा विनफ्रीले १० लाख डलर, लियोनार्दो डिक्याप्रियोले १२ मिलियन डलर , डलि पार्टनले १० लाख डलर दिने भएका छन् । यसरि हेर्दा खरबौ रुपियाँ उठ्न सक्ने देखिन्छ । के यसले कोरोना महामारी बिरुद्ध लड्न सहयोग गर्ला?
नेपाली कलाकारमा क-कसले कति दिए, त्यो पत्ता लाउने कामचै तपाईँ पाठकहरुको !